Lalana Marolambo (RN 23 A): tany lavitr’andriana, tsy misy mpijery | NewsMada
Lalana Marolambo (RN 23 A): tany lavitr’andriana, tsy misy mpijery
Anisan’ny tany lavitr’andriana tsy misy mpijery ny lalana mampitohy an’i Marolambo-Anosibe an’Ala, mivoaka any Moramanga. Mitaraina mikasika izany ny ben’ny Tanànan’ny kaominina Longozabe.
Tsy angano na arira ity ! « Tany amin’ny taona 1950, niala maraina any Marolambo ny fiara 1 000 kilao mpitatitra olona. Nandalo an’Anosibe an’Ala. Nandalo an’i Moramanga… tafiditra an’Antananarivo ny antoandron’iny andro iny ihany ! » Mitsangana ho vavolombelona Rabe Alphonse, ben’ny Tanàna ny kaominina Longozabe, distrika Marolambo. Maro ny mihevitra fa ny tanànan’i Moramanga sy Anosibe an’Ala ihany ny ampifandraisin’ny lalam-pirenena 23 A. Tonga hatrany an-tampon-tanànan’ny distrikan’i Marolambo anefa ity lalana ity, mirefy 100 km miainga avy eo Anosibe an’Ala, mandalo any Ambohinierana, Ambatoharanana, Longozabe, Maromitety Atsimo, Andonabe Atsimo… miampy tanàna dimy ary tonga ao Marolambo.
Zary nofy sisa izany amin’izao fotoana izao satria ratsy tanteraka ny lalana ary na ny sarety aza, tsy afaka mampiasa izany lalana izany intsony, indrindra anefa mankao Longozabe, renivohitry ny kaominina, lalovan’ny RN 23 A, 60 km avy ao Anosibe an’Ala, nanomboka ny taona 2005. Eo am-panentanana ireo fokontany lalovan’ity lalam-pirenena ity, ankehitriny, ingahy Rabe Alphonse, amin’ny fanajariana azy.
Hanome toky fitaka ny kandidà
Fa asa, mba misy firy ny tobim-pahasalamana misy miasa any? Rakotra ala ireto toerana resahina ireto: manana lanja lehibe amin’ny toekarena sy ny fizahantany ary ny toetr’andro. Manoran-dava ka maro ny sakafo vokarina any amin’iny faritra iny. Asa, mba misy firy ny tobim-pahasalamana misy mpiasa amin’iny RN 23 A iny?”Ny làlana sy fahasalamana mantsy no mahamaika an’ambanivolo!”, hoy ity ben’ny Tanàna. Mandritra ny fampielezan-kevitra ihany mantsy vao mba misy mpanao politika sy tompon’andraikitra midina ifotony any amin’ny tany lavitr’andriana toy izao.
Azo antoka fa ho maro indray ny kandidà hirotsa-kofidina hanome toky fitaka milaza fa hanarina ity RN 23 A ity, toy ny efa fanaon’izy ireo amin’ny lalam-pirenena faha-44 (Moramanga-Ambatondrazaka), tsy nisy nahavita godirao na iray aza, mandraka ankehitriny.